Sina plush Velor lamba famaohana landihazo 100%. Lamba famaohana Cabana Stripe Pool ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy olon-dehibe | Hefei Super Trade
Lamba famaohana Beach Velor
Lamba famaohana Terry Beach
Lamba firakotra lanjaina
Volon'ondry lamba firakotra
Lamba famaohana an-dakozia
Lamba famaohana dite
Lamba famaohana microfiber
plush Velor lamba famaohana landihazo 100%. Lamba famaohana farihy Cabana Stripe ho an'ny olon-dehibe
Ny lamba famaohana amoron-dranomasina Velor dia vita amin'ny landihazo 100%, tian'ny olona izy noho ny lokony marevaka, ny fahatsapan'ny tànany malefaka. Tsy afaka mamafa ny vatanao fotsiny aorian'ny fandroana na filomanosanao, fa hampafana anao ihany koa rehefa mahatsiaro mangatsiaka any ivelany ianao.
TOERANA AMIN'NY BAIBOLY VOALOHANY: vita amin'ny landihazo 100% ho an'ny fiononana sy firavoravoana faratampony. Tsara ny mampiseho ny fombanao amin'ny fotoam-pialan-tsasatrao amoron-dranomasina / amoron-dranomasina / pisinina. Raha mitady zavatra manokana ianao avy amin'ny lafivalon'ny lamba famafazana amoron-dranomasina dia safidy tsara izany.
MALALAKA, MORA SY MAHARITRA: landihazo mavesatra sy mavesatra no manome ny halemem-panahy, ny fifohana ary ny faharetana farany.
Fikarakarana mora: milina azo nosasana sy maharitra.
Hatevina sy habe ---- matevina Aveerage: 400gsm (grama isaky ny metatra toradroa) lamba famaohana amoron-dranomasina, maivana ary manify kokoa noho ny lamba famafazana morontsiraka 500-650gsm, mora entina sy maina. Masinina azo sasana sy maina amin'ny fikarakarana mora. , tsara ampiasaina isan'andro, hamonosana sy hamafana ilay lamba famaohana amoron-dranomasina na hametrahana amin'ny lamba famaohana.
Antsipirihany & Ocassion ---- Ity lamba famaohana amoron-dranomasina ity dia marefo miaraka amina endrika maroloko amin'ny lafiny eo aloha, fehiloha terry fotsy eo amin'ny ilany aoriana. Lafiny roa, fahatsapana roa samy hafa. Ny lamba famaohana lava dia malefaka sy mifoka. Azonao atao ny mampiasa azy io mandritra ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina na toy ny lamba famaohana aidina / fandroana fandroana. Izy io koa dia mety ho lamba firakotra lamba famaohana ao an-trano na mandritra ny dia. Miaraka amin'ireo lamina tsara, safidy tsara koa ny fanomezana ho an'ny olon-tianao, ny ray aman-dreninao ary ny namanao.
Sariaka sy azo antoka ho an'ny tontolo iainana: ny fizotry ny fanontana sy ny fandokoana ny tontolo iainana dia mitazona ny loko tsy hisy mihasimba. Ny fitaovana dia azo antoka amin'ny vatan'olombelona. Ny loko dia tsy handatsaka na hivoaka amin'ny hafa rehefa avy nanasa.
Entana Lamba famaohana amoron-dranomasina
Fitaovana Landihazo 100%
Habe 86x160cm, 75x150cm, 100x178cm na namboarina
Lanja 400gsm na namboarina
Famantarana sary famantarana ny peta-kofehyo / lable tenona
Fonosana PC 1 ao anaty kitapo paosin-tany na namboarina
MOQ 2000pcs isaky ny loko
Fotoana santionany 10- 15 andro
Ora nanomezana 45 andro aorian'izay fametrahana
Fepetra fandoavana T / T na L / C amin'ny fahitana
Fandefasana FOB Shanghai
Toetoetra 1) AZO maimaim-poana,
3) Sariaka sy malefaka ara-tontolo iainana
4) Fikolokoloana sy fikolokoloana hoditra
5) Fitaovana: landihazo 100%,
6) Fifadian-kanina sy fifoka amin'ny loko mahafinaritra aorian'ny fandroana
QUALITY LUXURIOUS - Vita amin'ny landihazo 100% ho an'ny halemem-panahy farafahakeliny, hafanana sy faharetana, TSY misy loko mihasimba, TSY MISY fihenan-danja, TSY misy rarahana aorian'ny fanasana na fampiasana rehetra
100% Customization- Manana ny orinasanay manokana izahay ary manohana ny OEM, azonay atao ny manamboatra ny loko ho fangatahanao.
Nampiasaina be dia be - Mety amin'ny fialan-tsasatrao eny amoron-dranomasina, tolak'andro kamo eo amin'ny valan-javaboary, na andro mangatsiaka eo amoron'ny pisinina - na inona na inona hahafaly ny fiainanao!
Teo aloha: Terry Cabana Stripe Beach lamba famaohana - lamba famaohana vita amin'ny landy 100%, lamba famaohana malefaka sy haingana Terry Terry
Manaraka: Fiononana Royal sy malefaka miloko marevaka Velor Terry Beach lamba famaohana misy loko mamirapiratra vita amin'ny landihazo 100%.
Lamba famaohana amoron-dranomasina Velor cabana
Vokatra famarotana mafana
Kalitao Voalohany, azo antoka ny fiarovana
lamba famaohana an-dakozia vita amin'ny lamba landy misy amboradara
akanjo ba vita amin'ny haran-dranomasina sy akanjo lava ho an'ny lehilahy sy akanjo lava ...
lamba famaohana an-dakozia manodidina ny landihazo
Akanjo akanjo mandry sy akanjo mandry lafo vidy ary s ...
Disney pirinty satroka sy apron ho an'ny ankizy
lamba firakotra sy kojakojam-pandriana Microfiber
Adiresy: Rm 1806 IFC Mansion, No.18 Meishan Rd, Hefei, Sina
Fandriana volon'ondry coral, Lamba latabatra PEVA, Cover Milky Flannel Duvet, lamba famaohana an-dakozia, Farafara fandriana microfiber, Mpihazakazaka latabatra,